चीनले अर्जेन्टिनाको मरुभुमीमा ठुलो एन्टेना टावर निर्माण - Nayapul Online
चीनले अर्जेन्टिनाको मरुभुमीमा ठुलो एन्टेना तथा टावर निर्माणका साथै उसको आकाशमा ४५० टनबराबरको अन्तरिक्ष स्टेसन निर्माण गरेको छ । यो स्टेसन चिनियाँ सेनाले बनाएको हो ।
यद्यपि यो स्टेसन निर्माणको लागि गोप्य किसिमले सम्झौता हुनुले भने यस विषयमा केही आशंकाहरु देखिएका छन् । यो सम्झौता त्यतिबेला भएको थियो, जतिबेला अर्जेन्टिनालाई लगानीको ठुलो आवश्यकता थियो । यस्तोमा चिनियाँ अधिकारीहरु अमेरिकाको जानकारी बढीभन्दा बढी हासिल गर्नका लागि क्षमता विस्तारको मौका हेरिरहेका थिए । यस्तोमा अर्जेन्टिनामा पनि चीनको यस किसिमको प्रभावले कस्तो किसिमको खतरा उत्पन्न हुनसक्छ भन्ने विषयमा पनि चर्चा सुरु भएको छ ।
Suhagra buy online, clomid online. के यो अमेरिकाको कमजोरीले भएको हो ?
अमेरिकाका एक प्रोफेसरले पछिल्लो समय चीन अर्थव्यवस्थाका साथै राजनीतिमा पनि व्यापक विस्तारको योजनामा अघि बढ्दै आफ्नो प्रभाव पनि व्यापक मात्रामा विस्तार गर्न सफल रहेको बताए । पछिल्लो एक दशकमा अमेरिकाले आफ्नो सहयोगी मुलुकहरुमा ध्यान दिनुभन्दा पनि पहिला एसियन मुलुकहरुमा ध्यान केन्द्रित गरेको उनको भनाइ छ । ओबामाको सरकारको पालामा अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिको हिसाबमा एसियाली मुलुकहरुमा आफ्नो बलियो आर्थिक, सैन्य तथा कूटनीतिक सम्बन्ध बलियो बनाएका थिए तर ट्रम्पको प्रशासन आएसँगै भने एसिया तथा दोस्रो मुलुकहरुमा सुरक्षाको हिसाबमा अमेरिकाको बोझ बढेको भन्दै उक्त सहयोगहरु कटौती गर्ने तथा व्यापारयुद्ध बढाउने नीति अघि सारिएको हो । यसले अमेरिका थप कमजोर बन्न पुगेको विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय ल्याटिन अमेरिकामा व्यापक राजनीतिक परिवर्तन आएको देखिन्छ । नेताहरु चीनको माग पूरा गर्नका लागि आफ्नो नीतिमा नै परिवर्तनको लागि अग्रसर देखिएका छन् । जसको कारण अहिले ल्याटिन अमेरिकाको धेरैजसो क्षेत्रमा चीनको प्रभाव रहेको देखिन्छ । चीन र ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरुबीचको व्यापार गएको वर्ष दुई खर्ब ४४ अर्ब डलर पुगेको थियो । यो नतिजा अघिल्लो एक दशकको तुलनामा दोब्बरभन्दा पनि बढी हो ।
मोदीलाई झड्का, राहुल लहर बढ्यो